Aluminium sy fahasalamana | Nutri Diet
Ancaro | | soso-kevitra, aretina, sakafo
Inona no fifandraisana misy eo amin'ny alimo sy ny fahasalamana? Voasoratra ho iray amin'ireo singa betsaka indrindra eto ambonin'ny planeta, ny fihoaram-pefy dia mety hanimba ny fahasalamana. Na izany aza, noho ny habetsahany tokoa, ny fisorohana an-tsokosoko amin'izany dia asa sarotra.
Betsaka ny loharanon'ny alimina amin'ny fiainanao andavanandro, ny lehibe indrindra dia ny sakafo, na dia tsy izy irery aza. Ireto misy fanalahidy tokony ho fantatrao momba an'ity vy ity.
Metaly ao amin'ny vatana
1 Ahoana raha misy aliminioma be loatra amin'ny vatan'olombelona?
2 Inona no sakafo hohanina manan-karena amin'ny aliminioma
2.1 Aluminium voajanahary
2.2 Nanisy aluminium
3 Loharano hafa an'ny alimina
4 Inona no tokony hatao mba hanesorana ny alimo amin'ny vatana
5 Manana tombony amin'ny vatana ve ny aliminioma sa tsia?
5.1 Tombontsoa azo avy amin'ny aliminioma ao amin'ny vatana
Ahoana raha misy aliminioma be loatra amin'ny vatan'olombelona?
Ny aliminioma dia miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny sakafo. Heverina fa amin'ny antsalany eo ho eo amin'ny miligrama aluminium no alaina isan'andro. Tsy hampidi-doza io fatra io, satria ambanin'ny ambany indrindra izay heverina fa mampidi-doza amin'ny fahasalamana.
Na izany aza tsy ny rehetra no mizara izany hevitra izany. Ary misy ny olona manontany tena fa ambany dia ambany ny vola raisina. Ny fandalinana sasantsasany momba ny aliminioma sy ny sakafo dia manome ny habetsaky ny vokatra mihamangatsiaka sy ny fanaovana mofo.
Rehefa be loatra ny aliminioma dia afaka miangona ao amin'ny taova izy ary mamokatra soritr'aretina sy olana ara-pahasalamana maromaro, manomboka amin'ny fandoavana sy ny fivalanana ka hatramin'ny aretina lehibe kokoa. Ny fikarohana sasany dia nampifandraisina tamin'ny fivontosan'ny ati-doha avo sy maharitra ary ny risika mitombo amin'ny aretina toy ny dementia.
Inona no sakafo hohanina manan-karena amin'ny aliminioma
Ny aliminioma amin'ny sakafo dia hita voajanahary na ampiana mandritra ny fikarakarana. Tsara homarihina fa, tsy toy ny vitamina na mineraly, tsy misy tombony ara-pahasalamana amin'ny fampidirana ireo sakafo manankarena amin'ny alimina amin'ny sakafo.
Ny trondro sasany dia anisan'ny sakafo misy aliminioma betsaka indrindra. Saingy ny fandraisana anjara dia mety miovaova be amin'ny karazany iray ka hatramin'ny iray hafa, satria avo lenta amin'ny sasany ary tsy misy dikany amin'ny hafa.
Ny hena vaovao, atody ary voankazo sy legioma dia misy alimo ihany koa. Ny epinara dia ny legioma izay manangona ny aluminium betsaka indrindra, mihoatra ny ambiny.
Raha resaka zava-pisotro dia tsy maintsy asongadintsika ilay dite. Miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny alimina ambany kokoa dia ny ranom-boankazo sy ny kafe. Fa kosa, ny fifantohan'ity metaly ity amin'ny rano fantsona dia mety ho ambany dia ambany.
Ny indostrian'ny sakafo dia mety mampiditra additives aliminioma amin'ny maro amin'ireo vokatra ao aminy ho an'ny tanjona samihafa. Ilaina ny mandinika ny fisian'ny aliminioma miampy ao anaty fromazy sy kakaô efa voahodina, ary koa vovo-mofo ary pickles.
Raha te hisoroka azy ianao dia matetika ny aliminioma no voatanisa ao amin'ny lisitry ny akora ilaina amin'ilay vokatra. Na izany aza, azo antoka ireo vola ireo raha ny filazan'ny masoivoho isan-karazany, ka tsy misy antony tokony hitebahana.
Loharano hafa an'ny alimina
Tsy voafetra amin'ny sakafo ihany ny aliminioma, fa azo atao koa ny mahita an'io singa io na aiza na aiza amin'ny fiainanao isan'andro. Ny deodorants, ny kojakoja ao an-dakozia ary ny fitoeran'ny soda dia zavatra sasany ao amin'ny ankamaroan'ny trano misy aliminioma.
Ny kabinetra fanafodyo dia mety misy alimo ihany koa. Ary ity metaly ity koa dia miditra amin'ny vatanao amin'ny alàlan'ny fanafody mihoatra ny fivarotana, toy ny fanafody fanaintainana na antacid.
Mivadika ho mena ve ny ambanin'ny tongotrao aorian'ny fametahana deodorant? Mety hitranga izany satria maro amin'ireo vokatra ireo no misy alimo. Ny fihenan'ny alikaola dia matetika miaraka amin'ny antiperspirants matanjaka.
Mitadiava deodorants miaraka amin'ny alimina ambany indrindra. Ary raha tsy olana ny hatsembohana dia diniho ny deodorants voajanahary, izay fofona maska ​​tsara nefa tsy dia mandaitra amin'ny fisorohana hatsembohana.
Ny aliminioma avy amin'ny lakozia vita amin'ny aliminioma, toy ny vilany na vilany, dia azo antoka amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ny tsy fitsaboana sy fitsaboana hafa dia manakana azy tsy hiditra amin'ny sakafo.
Saingy ny sakafo misy asidra, toy ny voatabia, dia afaka mamoaka ireo sosona amboniny ireo ary mahatonga ny aliminioma betsaka kokoa hiafara amin'ny sakafo. Noho io antony io dia tsara ny hitady fomba hafa aliminioma rehefa mahandro na mitahiry ireo sakafo ireo.
Inona no tokony hatao mba hanesorana ny alimo amin'ny vatana
Tsy mila manao zavatra manokana hanesorana ny aliminioma amin'ny vatana. Ny olona salama dia afaka manatanteraka an'io asa io voajanahary. Ny azonao atao dia ny mandray fepetra amin'ny fiainanao isan'andro mba hampihenana ny fihenan'ny metaly an'ity metaly ity.
Misy zavatra vitsivitsy izay heverina fa manampy hitazona ny aliminioma, ity manaraka ity no malaza indrindra:
Mampiasa fomba hafa amin'ny aliminioma handrahoana sakafo
Sorohy ny deodorants sy ny fanafody misy alimo (azonao atao ny manandrana mpisolo toerana voajanahary)
Manana tombony amin'ny vatana ve ny aliminioma sa tsia?
Ny aliminioma dia singa iray tsy maintsy misy eo amin'ny vatanao satria manome anao tombony samihafa izy io, noho izany dia mila manao sakafo isan-karazany ianao izay tsy misy tsy fahampian'ny hena, voankazo, legioma ary ronono. Ny soatoavina aluminium avo indrindra amin'ny vatan'ny olona dia ao amin'ny ovaire, testes, aty ary havokavoka.
Na izany aza, zava-dehibe indrindra ny fahafantaranao fa tamin'ny fikarohana be dia be no nanaparitahana fa ny olona izay tsy manana aliminioma ampy amin'ny vatany dia mety hijaly amin'ny fikorontanana samihafa toy ny fanovana vitamina B na fihenan'ny asa ataon'ny dehydrogenase succinic ankoatry ny zavatra hafa.
Tombontsoa azo avy amin'ny aliminioma ao amin'ny vatana
Na dia betsaka aza ny fanadihadiana manamafy fa tsy mahasoa ny fahasalamana ny aliminioma, amin'ny hafa dia azontsika vakiana fa ny metaly dia manome andian-tombo azo tsaboina ho an'ny vatana:
Hanampy anao hahomby amin'ny fampivoarana ny rafi-pitabatabana izany.
Hanampy ny rafitry ny taovam-pisefoanao hiasa tsara kokoa izany.
Hanampy anao handamina ny torimasonao izany.
Hanampy anao hisoroka ny tsinainao tsy hisoroka fosforôra izany.
Hanampy anao hanana toe-pahasalamana tsara amin'ny cartilage anao izany.
Hanampy anao hanana fahaizana ara-tsaina tsara kokoa izany.
Izy io dia hanampy anao hanatsara ny toetoetran'ny tonon-taolana.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba inona ny metaly ao amin'ny vatantsika ary ny antony maha-zava-dehibe azy ireo amintsika, ampidiro ilay rohy izay navelanay teo aminao ary ilazanay aminao fa ankoatry ny aliminioma dia mila metaly hafa ny olombelona mba hiasa tsara ny metabolisma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Aluminium sy fahasalamana
ny lahatsoratra dia mifanohitra tanteraka amin'izay lazain'ny fanadihadiana siantifika matotra fa manimba fahasalamana ny aliminioma ary tokony hialana, mba tompon'andraikitra !!!!!
alirium dia hoy izy:
Nasehon'ny fanadihadiana fa manimba fahasalamana tokoa ny aliminioma, jereo ireo rakitra aluminium
Mamaly an'i alirio
Fikarohana siantifika lehibe?: Mampametra-panontaniana ny fanadihadiana toy izany ity lahatsoratra ity.
Fikarohana siantifika lehibe?: Mampametra-panontaniana ny fandinihana toy izany ity lahatsoratra ity. Inona no fantatrao momba ity olana ity hanilihana an'ity lahatsoratra ity? .-
Alice: Raha manimba ny vatana ny aliminioma, saingy mbola singa manara-penitra izay mila misy ao amin'ny vatan'olombelona io dia mazava fa poizina izy io, fa ny zavatra rehetra mihoa-pefy dia ratsy avokoa. Nandinika nandritra ny fotoana kelikely aho ary tsy ny pejy voalohany novakiako no milaza zavatra mitovy amin'izany.
Na dia mila referansa amin'ity lahatsoratra ity aza ianao ¬¬
Karolina dia hoy izy:
IZAO DOHA Notsaboina tamina dokotera natanista, ARY aorian'ny nanaovako tombantombana marobe dia tonga tamin'ny fehin-kevitra izay malahelo ny ALUMINUMA aho.
HO AN'NY MIAROTRA, NY KOKA, IZAY REHETRA TOROHEVITRA. ARY HO AN'NY FITONDRANA NY torimaso sy ny fifohana rivotra koa. SATRIA MAMPIASA AMBONY AMBONDRO NO BETSAKA. Nomeny fanazavana aho ary toa lojika tsara.
Valiny amin'i KAROLINA
FIA dia hoy izy:
Sarotra ny mieritreritra amin'ny andalana vitsivitsy, noho izany dia hamboarintsika.
Ny zava-manan'aina rehetra dia manana ny singa simika ao amin'ny firafitray, noho izany dia zara raha misy zavatra izay ampahany amin'ny vatantsika tsy mety mihinana, hendry ny natiora fa tsy tanan'olombelona. Ny poizina ananan'ny singa simika dia avy amin'ny endrika, ny fomba ary ny habetsaky ny singa voalaza fa ny singa ihany, izany hoe:
FORM: amin'ny fihinanana isan'andro dia raisintsika ny singa simika rehetra, ao anatin'izany ny arsenika metaly mavesatra, firaka, merkiora, cadmium, barium; Ny poakaty dia misy poizina raha tsofokaina (tantanana) fa tsy entina amin'ny rano famaohana ary amin'ny sakafo sasany dia misy poizina raha toa ka voatsabo tamina fako na firamainty.
AHOANA: Tsy mitovy ny mandray serealy amin'ny fihinana vy na varahina, izay misy voajanahary ho an'ny vatan'olombelona, ​​toy izay maka vy sy varahina mivantana, dia holavin'ny vatantsika izany. IZA INDRINDRA: mandray sira isan'andro isika, ary tsara sy ilaina izany, saingy tsy misy olona sahy mihinana sotro fihinana roa indray mandeha satria mety tsy ho velona hitantara ilay tantara izy ireo.
Raha fintinina: Ireo toerana izay mbola virjiny, tsy lavitra ny fanodikodin'olombelona, ​​ny tontolo iainana dia be, mahasalama ary manankarena, tsy misy olana misy poizina avy amin'ny sakafo sy ny fitambarana.
Mamaly an'i Fia
Ny fandalinana siantifika dia nanapa-kevitra fa tsy mahita anjara biriky entin'ny aliminioma ao amin'ny vatantsika izay mahasoa izy ireo, mifanohitra amin'izany no ahitan'izy ireo fa ratsy ao amin'ny vatantsika izany, indrindra ireo olona manana olana amin'ny voa satria tsy afaka manala ny alimo ao amin'ny vatana, te-hanala aluminium ny vatana fa tsy afaka, misy aliminioma amin'ny kapoaka soda, deodorants, ao anaty vilany an-dakozia, amin'ny isa tsy tambo isaina, voalaza fa manana io aluminium io ny vatan'olombelona, ​​saingy tsy nahita andraikitra tokony horaisina izy ireo ao amin'ny vatan'olombelona mahasoa, fa raha fantatra tsara fa raha mankany amin'ny atidoha dia neurotoxin mahery, rehefa mahandro amin'ny vilany aluminium ianao dia fantatrao hoe ohatrinona no avoaka amin'izy ireo? mitandrema tsara mamaky bebe kokoa azafady manapoizina ny tenanao.
Ny fanehoan-kevitra ara-tsiansa amin'ity lahatsoratra ity dia mandà ny filazanao fa manimba ny aliminioma, ary tsy izany ihany, fa mora kokoa amin'ny fahasalamantsika ny mihinana azy.
Inona no karazana fikarohana siantifika ataon'ireo izay manoro hevitra ny tsy fihinanana sakafo voajanahary satria misy aliminioma izy ireo? ... Mitandrema tsara, azafady, aza te-hanafoana antsika amin'ny sakafo tena tsara misy aluminium, satria ny natiora no nametraka azy io ho an'ny fahasalamantsika .-
Ny aliminioma dia singa be dia be amin'ny natiora (inorganic), hita ao amin'ny crust eto an-tany izy io saingy tsy ampahany lehibe amin'ny fizotran'ny biolojika, ary na dia kely aza ny fifantohana dia misy poizina ho an'ny zava-manan'aina; ny olona sasany dia mora tohina kokoa noho ny hafa amin'ity poizina ity. Vakio azafady, fantaro